Qaamuuska kumbuyuutarka (B) | Ragga Stylish
Kaar: Muddada inta badan loo isticmaalo xisaabinta. Waxay loola jeedaa xaqiiqda abuuritaanka nuqul nuqul ah oo xog ah oo lagu martigeliyay dhexdhexaad gaar ah. Waxaa loo sameeyaa si looga hortago luminta macluumaadka. Xogta ku kaydsan kaydka waxay u adeegtaa inay dib ugu noqoto xaaladdii hore ee macluumaadka haddii ay dhacdo musiibo.
Santuuqa: Sanduuqa emailka.
Macluumaadka: Tiro xog ah oo loo abaabulay qaab ay u fududahay helitaankiisa, maamulkiisa iyo cusbooneysiintiisu.
laf- (lafdhabarta): Xidhiidh xawaare sare leh oo ku xira kumbuyuutaro mas'uul ka ah wareejinta macluumaad badan. Laf-dhabaryadu waxay isku xiraan magaalooyinka, ama waddammada, waxayna ka kooban yihiin qaab-dhismeedka aasaasiga ah ee shabakadaha isgaarsiinta. Waxaa loo adeegsaday isku xirnaanta shabakadaha midba midka kale iyadoo la adeegsanayo noocyo kala duwan oo teknoolojiyad ah.
Albaabka dambe (ama dabaq dabin, albaab gadaal ama albaab dabin): Qeybta qarsoon ee barnaamijka kumbuyuutarka, kaas oo kaliya la howlgelinayo haddii ay jiraan xaalado ama duruufo gaar ah oo ku jira barnaamijka.
Background: Gundhig ama taariikh.
Calan: Ogeysiiska xayeysiinta ee kujira qeyb ka mid ah bogga internetka, guud ahaan wuxuu ku yaalaa qeybta kore ee xarunta. Adoo gujinaya, badmaaxuhu wuxuu gaari karaa goobta xayeysiiyaha.
BBS (Nidaamka Guddiga Daabacaadda, Nidaamka Fariinta oo waliba si khaldan loogu yeero Xog-ururin): Waa nidaam isweydaarsi xog kumbuyuutar ah oo u dhexeeya koox dad ah oo wadaaga aag juquraafi ahaan halkaasoo faylasha, farriimaha iyo macluumaadka kale ee waxtarka leh ay isku weydaarsan karaan isticmaaleyaasha kala duwan.
bc: nuqul kaarboon indho la '. Hawl kuu oggolaanaysa inaad farriin e-mayl u dirto in ka badan hal qof oo qaata. Si ka duwan shaqada cc, magaca qaataha kuma muuqanayo cinwaanka.
Tilmaanta: barnaamijka si gaar ah loogu talagalay in lagu qiimeeyo waxqabadka nidaam, softiweer ama qalab.
Imtixaanka beta Nidaamka horumarinta softiweerka, waa wajiga labaad ee xaqiijinta ama tijaabinta, kahor bilawga sheyga.
BIOS (Nidaamka Soo-galinta / Soo-saarista Aasaasiga ah): Nidaamka gelitaanka / bixitaanka xogta aasaasiga ah. Nidaamyo kala duwan oo xakameynaya qulqulka xogta u dhexeysa nidaamka hawlgalka iyo aaladaha sida disk-ka adag, kaarka fiidiyaha, kumbuyuutarka, jiirka, iyo madbacadda.
Waxoogaa: agaagaaban laba lambar Waxoogaa yar ayaa ah qaybta ugu yar ee lagu kaydiyo nidaamka binary ee kumbuyuutarka dhexdiisa ah.
Binhex: Halbeeg lagu qoro xogta hoostagta barxadda Macintosh, ayaa loo isticmaali jiray in lagu diro lifaaqyo. La mid ah fikradda MIME iyo Uuencode.
Bookmark (calaamadeyn ama ugu cadcad): Qaybta menu-ka ee biraawsar oo aad ku keydin karto boggaga aad jeceshahay, ka dibna ugu laaban iyaga si fudud adoo dooranaya iyaga oo gujinaya guji fudud miiska.
Boot (si loo kabo ama loo kiciyo): rakibo nidaamka hawlgalka kombiyuutarka.
robot: Gaaban loo yaqaan 'robot', waxay sidoo kale loola jeedaa barnaamijyada kombiyuutarka ee otomaatiya howlaha caadiga ah.
Dhalo: Isku darsiga xirmooyinka xogta (macluumaadka) ku wareegaya isku xirnaanta sababa dib udhaca wada xiriirka.
bps: Gabal ilbiriqsiyo.
Buundo: Aaladda loo adeegsado isku xidhka laba shabakadood oo ka dhiga inay u shaqeeyaan sidii inay iyagu mid yihiin. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in loo kala qeybiyo shabakad shabakado yar yar, si loo kordhiyo waxqabadka.
Browser / shabakad shabakadeed: Barnaamijka kuu oggolaanaya inaad ka akhrido dukumiintiyada Webka oo aad raacdo xiriiriyeyaasha (xiriiriyeyaasha) laga bilaabo dukumintiga illaa dukumintiga Hypertext Daalacashaduhu "way codsadaan" faylasha (bogagga iyo kuwa kale) ee ka imanaya server-yada websaydhka iyadoo la raacayo xulashada isticmaalaha ka dibna ku soo bandhigaya natiijada kormeeraha.
Buffer: Meel xusuus ah oo loo isticmaalo in si ku meelgaar ah loo keydiyo xogta inta lagu jiro fadhiga shaqada.
Qalad cayayaan, cayayaan Khaladka barnaamijka ee dhibaatooyinka ku keena howlaha kombiyuutarka.
Bas: Isku xirka guud; kaariye guud; habka isku xidhka Habka isku xidhka qalabka adoo adeegsanaya hal khad oo la wadaago. Tilmaamaha Baska node kasta wuxuu ku xiran yahay fiilo guud. Xarun looma baahna shabakad cilmiga basaska.
Baska Serial: habka ugu gudbinta hal mar markiiba hal xariiq.
Boolean (boolean): Caqli macquul ah oo loo adeegsado in lagu muujiyo xiriirka ka dhexeeya ereyada xisaabta. Sababteeda macquul ah ayaa lagu kordhin karaa si loo falanqeeyo xiriirka ka dhexeeya ereyada iyo weedhaha. Labada astaamood ee ugu caansan waa NA (iyo) iyo AMA (ama).
Bmashiinka raadinta (Raadinta Mashiinka, mashiinka raadinta): Qalab kuu oggolaanaya inaad ka heshid waxyaabaha ku jira internetka, adigoo hab Booleyn ah ugu dhex raadinaya ereyada muhiimka ah. Waxay ku abaabulan yihiin matoorada raadinta erey ama tilmaamo (sida Lycos, Infoseek ama Google) iyo matoorada raadinta mawduucyada ama Diiwaanada (sida Yahoo!).
Bayte: Qaybta macluumaadka ee ay isticmaalaan kumbuyuutarradu. Bayt kastaa wuxuu ka kooban yahay sideed jajab.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Qaamuuska Kumbuyuutarka (B)
Waa maxay waraabow sideese u faafaa?